HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa Kala iibsiga: Lamptey, Zakaria, Arthur, Bissouma, Tielemans, Haidara
January 13, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Manchester United ayaa xiiseyneysa daafaca midig ee Brighton Tariq Lamptey. Brighton ayaa ku dooneysa 40 milyan ginni 21 jirkaan, kaasoo u soo ciyaaray England U21. (Dailymail)
Kooxda ka dhisan Old Trafford ayaa sidoo kale xiriir la sameysay wakiillada Borussia Monchengladbach iyo xiddiga khadka dhexe ee Switzerland Denis Zakaria, oo 25 jir ah. (Sport Bild).
Arsenal ayaa xiriir la samaysay Juventus heshiis amaah ah oo ay ku doonayso xiddiga khadka dhexe ee Brazil Arthur Melo, oo 25 jir ah. Waxa ay sidoo kale bartilmaameedsanayaan xiddiga khadka dhexe ee Leicester iyo Belgian Youri Tielemans, 24. (Goal).
Gunners ayaa sidoo kale weli xiiseyneysa weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic, 21, laakiin waxay ku dhibtoon doontaa inay maalgeliyaan u dhaqaaqista Serbia dhamaadka bishaan (Sky Sports).
Fiorentina ayaa doonaysa inta badan 75 milyan oo euro oo u dhiganta (£62.6m) oo ay ku doonayso Vlahovic laakiin Arsenal waxa ay doonaysaa in heshiis laga gaadho qaabka lacag bixinta ee heshiiska. (Independence)
Paris St-Germain ayaa xiiseyneysa saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba, iyadoo 28 jirka reer France uu sidoo kale doonayo inuu u dhaqaaqo kooxda Ligue 1 ka dhisan. (L’Equipe)
Dhanka kale maamulaha PSG Mauricio Pochettino ayaa wali la xiriirinaya Manchester United si uu ugu dhaqaaqo xagaaga. Si kastaba ha ahaatee, maamulaha ku meel gaadhka ah ee Ralf Rangnick, ayaa aad u xiiseeya tababaraha Ajax Erik ten Hag. (Sun)
Daafaca Chelsea Antonio Rudiger ayaa haatan qorsheynaya inuu sii joogo Stamford Bridge. Jarmalka, oo 28 jir ah, ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xilli ciyaareedka soo socda, waxaana lala xiriirinayay inuu ka tagayo. (Teamtalk)
Aston Villa ayaa ceyrsaneysa saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Brighton Yves Bissouma, oo 25 jir ah.
Ousmane Dembele ayaa qarka u saaran inuu ka tago Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan, Manchester United ayaana aad u dooneysa 24 jirka reer France. Mirror
Newcastle ayaa wadahadalo kula jirta weeraryahanka Reims Hugo Ekitike, 19 jirka reer France ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo Tyneside. (Sky Sports)
Tottenham ayaa rajeyneysa inay heshiis amaah ah kula soo saxiixato garabka Spain Adama Traore iyadoo ay waajib ku tahay inay ka soo iibsadaan Wolves , kuwaas oo ay u badan tahay inay doorbidaan heshiis toos ah 20 milyan ginni 25 jirkaan. (Telegraph)
Leicester City iyo Filip Benkovic ayaa ku heshiiyay in la kansalo heshiiska 24 jirka reer Croatia. (Leicester Mercury)
Newcastle ayaa isku diyaarinaysa inay dalab ka gudbiso 23-jirka RB Leipzig iyo khadka dhexe ee Mali Amadou Haidara. (Dailymail)
Newcastle ayaa dalab 28 milyan ginni ah ka gudbisay daafaca Sevilla iyo Brazil Diego Carlos. Magpies ayaa hore u haysatay dalab 25 milyan ginni ah oo ay ku doonaysay 28 jirkan waa laga diiday. (Talksport)
AC Milan ayaa miisaamaysa inay u dhaqaaqdo saxiixa daafaca Ivory Coast Eric Bailly oo ay amaah kaga soo qaadatay Manchester United laakiin kooxda Old Trafford ka dhisan ayaa laga yaabaa inay ka caga jiido inay u ogolaato 27 jirkaan. (Times)
Juventus ayaa xiiseyneysa inay amaah ugu dhaqaaqdo weeraryahanka Barcelona iyo Netherlands Memphis Depay, 27. (Di Marzio).
Goolhayaha West Ham Lukasz Fabianski ayaa qarka u saaran inuu qandaraas hal sano ah u saxiixo kooxdiisa. 36 jirkaan ayaa ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah ee Poland sanadkii hore. (Thesun)
Weeraryahanka Brazil Gabriel Barbosa ayaa ahaa mowduuca dalab ka yimid West Ham horaantii bishaan, 25 jirkaan ayaa qarka u saaran inuu u sheego Flamengo inuu doonayo inuu ka tago kooxda si uu ugu biiro England. (Sky Sports)
Manchester United ayaa mudnaanta siin doonta qandaraaska cusub ee weeraryahanka England Marcus Rashford. 24-sano jirkaan qandaraaskiisu wuxuu dhacayaa Juun 2023. (ESPN)